Nifidy ny hijanona miaraka amin’i Frantsa i Nouvelle-Calédonie tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka tsy nandraisan’ny vahoaka indizeny anjara · Global Voices teny Malagasy
Naniry ny hihemoran'ny fitsapan-kevi-bahoaka ny vahoaka Kanak noho ireo matin’ny valan’aretina
Voadika ny 02 Febroary 2022 3:46 GMT
Kara-pifidianana tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka ho amin'ny fahaleovantenan'i Nouvelle-Calédonie tamin'ny volana Novambra 2018. Sary avy amin'i gérard tao amin'ny Flickr, (CC BY-SA 2.0)
Tamin'ny 12 Desambra, nanapa-kevitra ireo mpifidy any Nouvelle-Calédonie hijanona ho zaratanin'i Frantsa tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka simban'ny taham-pahavitrihana ambany sy ny tsy fandraisan'ny vahoaka indizeny Kanak anjara.
Faritany Pasifika Atsimo nozanahan’i Frantsa tamin'ny taona 1853 i Nouvelle-Calédonie ary lasa fonjan’ny zanatany ho an'ireo voaheloka sy ny mpanohitra ara-politika. Tafiditra ao amin'ny lisitry ny Firenena Mikambana tokony hiala tamin’ny fanjanahantany izy nanomboka tamin'ny taona 1986.
Nitarika ny famolavolana sy ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-pihavanan'i Noumea tamin'ny taona 1998 ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny Kanaks sy ny taranaky ny Eoropeana mpifindra monina tamin'ny taompolo 1980 izay nahitana ny fanatontosana ny fitsapankevi-bahoaka momba ny fahaleovantena misy fizarana telo mba hamaritana ny hoavy ara-politikan'i Nouvelle-Calédonie.
Tamin’ny volana Novambra 2018 ny fitsapan-kevi-bahoaka voalohany raha natao ny volana Oktobra 2020 ny latsa-bato faharoa. Tamin’ireo tranga roa ireo, nisafidy ny hijanona miaraka amin’i Frantsa ny mpifidy saingy 10.000 fotsiny ny elanelam-bato tamin'ny taham-pahavitrihana 80 isan-jato mahery. Tombanana ho 25.000 ireo mpifidy tsy tapa-kevitra. Nanantena fa handresy amin'ny isam-bato betsaka ny vondrona mpanohitra ny fahaleovantena saingy nasehon'ireo fitsapan-kevi-bahoaka roa ny fitomboan'ny fanohanana mankany amin'ny fizakan-tenan'ny vahoaka Kanak .
Nisy vondrona samihafa nitaky ny hanemorana ny fitsapan-kevi-bahoaka fahatelo noho ny fiantraikan'ny famerana ara-pahasalamana tamin’ny COVID-19. Nanambara taona fisaonana ihany koa ny loholona Kanak taorian'ny nahafatesan’ny vahoaka Kanak miisa 300 mahery tamin'iny taona  iny noho ny COVID-19. Saingy nandà ilay fanangonan-tsonia i Frantsa ary nanomana ny fitsapan-kevi-bahoaka amin'iny volana desambra iny, na dia mamela ny fifidianana hotontosaina hatramin'ny taona hoavy aza ny fifanarahan'i Noumea.
Ho setrin'izany, nanentana ny mpifidy hanao ankivy ny fitsapan-kevi-bahoaka ireo vondrona mpanohana ny fahaleovantena. Noho ny tsy fandraisana anjaran'ny vahoaka Kanak, 43,9 isan-jato monja ny taham-pahavitrihana.
Namoaka fanambarana nandà ny valin'ny fitsapan-kevi-bahoaka ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena ao Pasifika:
Tsy nisy fifampidinihana ny fitsapan-kevi-bahoaka ary tsy mahasoa ny vahoaka Kanaky, izay nampiasa ny zony tsy handray anjara amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka sandoka.
Manambara mazava amin’i Frantsa mikasika ny hevitry ny vahoaka ity tsy fandraisan'ny vahoaka indizeny mpomba ny fahaleovantena anjara ity fa tsy azo heverina ho tena fanapahan-kevitry ny vahoaka Kanak ny voka-pifidianana.
Nangataka ny Firenena Mikambana mba hanambara ny vokatry ny fitsapankevi-bahoaka fahatelo ho foana sy tsy manan-kery noho ny tsy fandraisana anjaran'ny vahoaka indizeny ao Kanaky ny Melanesian Spearhead Group, fikambanan'ny faritra ahitana mpikambana dimy ahitana an'i Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, Vanuatu, Nosy Solomon ary ny fiaraha-mitantana ho amin'ny fahaleovantenan'i Nouvelle-Calédonie (FLNKS).
Manohana tanteraka ny antson'ny FLNKS ho an'ny Firenena Mikambana hanambara ny valin'ny fitsapan-kevi-bahoaka faha-3 ho foana sy tsy manan-kery izahay noho ny ‘tsy fandraisan'ny vahoaka Kanaky anjara. Latsaky ny 50%-n'ny mpifidy voasoratra anarana ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy ka tsy azo raisina ho faniriana ara-dalàna avy amin'ny maro an'isa mangina izany!
Nanoratra momba ny fihetseham-pon'ny vahoakany i Marylou Mahe, Kanak mianatra any Frantsa:
Tsy afaka aorina ny hoavin'i Nouvelle-Calédonie raha tsy misy ny vahoaka indizeny. Ny feo Kanak no vato fehizoron'ny lahatra iraisan'i Nouvelle-Calédonie.
Fotoana fisaonana ho an’ny Kanak nentim-paharazana izao. Maherin'ny 50 isan-jaton'ny olona Kanak no matin'ny viriosy. Nanambara fe-potoana fisaonana herintaona ny Antenimieran-doholona ara-drazana, ny solontenan'ny vahoaka Kanak.
Nolavin'ny fanjakana anefa io olana io. Tsapanay fa mariky ny fanaovana tsinontsinona izany. Tsapako fa tsinontsinoavina ny kolontsaiko, lavina ny mari-panondroana amin’ny maha-Kanak ahy, ary miverina any amin’ny 30 taona mahery izahay. Amin'ny fotoana tsy hanomezan-danja ny feonay. Toy ny hoe tsy nisy izaho sy izahay.
Nanamarika ny maha-zava-dehibe ara-jeografia sy ara-politika an'i Nouvelle-Calédonia ho an'i Frantsa ilay manam-pahaizana, David Robie:
Tena manan-danja tokoa i Nouvelle-Calédonie amin'ny fanjohian'i Frantsa ny heriny ara-toekarena sy ara-tafika Indo-Pasifika ao amin'ny faritra, indrindra amin'ny fampifandanjana ny tara-pahazavana Shinoa mihamitombo any amin'ireo firenena Pasifika mahaleo tena. Zava-dehibe ho an'i Paris ny indostrian'ny fitrandrahana nikela sy ny tahiry ao aminy, manan-danja amin'ny famokarana vy tsy misy pentina, vatoaratra ary finday, ary ny faritra ara-toekarena an-dranomasina.
Nankasitraka ny valin'ny fitsapan-kevi-bahoaka i Frantsa ary nivoady fa hanohy ny fanavaozana sy ny fifanakalozan-kevitra misimisy kokoa any Nouvelle-Calédonie. Nilaza ny tompon’andraikitra fa tsy misy fiantraikany amin’ny maha-ara-dalàna ny fitsapan-kevi-bahoaka ny fahavitsian’ny taham-pahavitrihana.
Ahiana anefa fa mety handrehitra indray ny disadisa ara-politika ny tsy firaharahiana ny antso ataon'ny Kanak amin’ny fanemorana ny fitsapan-kevi-bahoaka. Mandritra izany fotoana izany, mitohy ny tolona ho amin'ny fizakantena Kanak any Nouvelle-Calédonie.